विजयकान्त कर्णको वालबाट जस्ताको त्यस्तै
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कसले हेर्छ ? नेपालले वा छिमेकी मुलुकले ? सयकडौँ वर्षदेखि बुद्ध धर्मगुरुको मनाउँदै आएको जन्मदिनमाथि प्रतिबन्ध। राष्ट्रवादको गीत कहाँ हरायो ? राजा वीरेन्द्रले पुष्पलालको पार्थिव शरीर ल्याउन नदिएको, बीपीको जन्मदिन मनाउन नदिएको बिर्सिएको हो ?
अहिले यो देशलाई एउटा संस्थाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। प्रत्येक दिनको बडबडाहटलाई ध्यान दिने हो भने पागलखाना निर्माणको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सञ्चालन अति आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उडाउँछन्, जनताको भावनासँग मजाक गर्छन्। उखान–टुक्का सुनाएर देशको, जनताको समय बर्बाद गर्ने, आत्मप्रशंसामा लीन रहने, आफूलाई सबैभन्दा बढी चतुर र विद्वान् बुझ्ने, अनि बकम्फुसे गफ सुनाउने। पाँच वर्ष यस्तै भयो भने समृद्धि आउने पक्का !
सर्वाेच्च अदालतबाट समावेशिता र समानुपातिकको आशा ? यो त क्रूर मजाक हुन्छ। जसले सम्पूर्ण न्याय पद्धतिलाई नै एउटा विशिष्ट जातिका लागि सुरक्षित गरेको छ, त्यसले समावेशिताको रक्षा गर्छ ?
हामी रैती बन्न मात्र अस्वीकार गर्दैनौँ, हामीलाई रैती बनाउने यन्त्र र प्रवृत्तिको पनि विरोध गर्दै त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्छौं।
आफू डलरको खेती गर्नेहरू अरू सबैलाई उस्तै देख्छन्।
गुठी, मिडिया, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद्, आन्तरिक सुरक्षा, नेपाल र प्रदेश प्रहरी, सूचना प्रविधिलगायत संसद्मा पेश भएका विधेयकहरू संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र ६२÷६३ को जनआन्दोलनका विरुद्ध छन्। लोकतन्त्रको भजन गर्ने तर अधिनायकवादी सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्ने !
अधिनायकवादी चरित्र निर्माण भइरहेको छ। यो तयारीपछि सत्ता त्यस्तै हुने हो। खड्गप्रसादजीको सरकार अहिले समृद्ध नेपाल निर्माणको नाउँमा अधिनायकवादको रिहर्सल गर्दै छ।
लुट मच्चिएको छ। एमाले वृत्तले सकेसम्म लुट्ने हो। यिनीहरू यति अधैर्य छन् कि भोलि मौका आउँछ कि आउँदैन ! सत्ताको चरम दुरुपयोग कम्युनिस्टको नाउँमा। ‘समाजवाद बबुआ, धीरे–धीरे आई, एमाले नेता लोग के घर में समाई।’
खड्गप्रसाद ओली विदेशमा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै भाषण गर्दै हिँड्छन् तर देशभित्र लोकतन्त्रको मजाक उडाउँदै अनेक विधेयकमार्फत मिडिया, मानव अधिकार, सुरक्षा निकाय, प्रदेशको अधिकार, वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य मात्रै गर्दै छन्।
समृद्धि अभियानअन्तर्गत देश उँभो लाग्दै छ। त्यसमा पहाड र जंगलको कुनै अर्थ छैन। यो सबै भत्काएर समतल बनाउने हो। खड्गप्रसादजीको राष्ट्रवादी शासन बेलगाम घोडाजस्तै दौडिँदै छ।